Tambajotra sosialy sy fampisehoana varotrao | Martech Zone
Tambajotra sosialy sy fampisehoana varotrao
Talata, Septambra 11, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha nanana fotoana hihainoana ny resadresaka nifanaovanay tamin'i Crystal Grave of Snappening, fantatrao ny fankasitrahanay ireo mpandrindra ny hetsika. Mety tsy misy asa mafy kokoa amin'ny marketing satria mpivarotra hetsika be dia be no miasa tsy an-kijanona manerana ny fantsona ary koa miasa amin'ny fe-potoana henjana sy fanatanterahana. Tsy mahazo vintana faharoa miaraka amina hetsika iray ianao - io no mila mahafehy azy voalohany.
Ny hetsika dia fomba tsara hifandraisana amin'ireo mpanjifa ho avy, mpiara-miombon'antoka amin'ny marketing, mpiasa vaovao ary fitaomana lehibe eo amin'ny sehatry ny indostriao. Ianaro ny fomba fampiasana media sosialy hahazoana tombony betsaka amin'ny fanatrehana ny fampisehoana manaraka.
Sary mamorona avaratra-andrefana dia nanambatra an'ity sary ity tamin'ny tambajotra sosialy sy ny varotrao. Northwest Creative Imaging dia manome ny trano fisehosehoana malaza indrindra, fampirantiana fampiratiana ary fanontana endrika lehibe amin'ny vidiny mirary.